Falastiini 30 sano ka hor lagu diley London oo dib loo baarayo - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka MET POLICE
Image caption Naaji Saalim Xuseen Al Cali ayay sawiradiisa kusoo bixi jireen wargayska Al Qabas
Dilkii nin u dhashay Falastiin oo ahaa farshaxaniiste wargaysyada kusoo bandhiga sawirro siyaasadeed ayaa dib loo furey baaritaan la xiriira dilkiisa 30 sano kadib markii uu dilkaasi dhacay.
Naaji Saalim Xuseen Al Cali ayay sawiradiisa kusoo bixi jireen wargayska Al Qabas, waxaana laga toogtay qoorta xili uu marayay dariiq ku yaala magaalada London, halkaasi oo bil ka dib uu u dhintay dhaawicii rasaasta. Toogashada waxa ay dhacday 22-kii July, 1987-dii.
Laanta argagixiso la dagaalanka ee booliiska UK ayaa hadda doonaysa macluumaad la xiriira nin la sheegay in uu goobta kasii baxsanayay waxyar kadib markii uu dilka dhacay.
Sawirada Naaji ayaa mararka qaarkood waxa ay lid ku ahaayeen Israa'iil iyo xitaa maamulkii ururka PLO ee Falastiin ee uu hoggaamin jirey Yaasir Carafaat, waxayna dad siyaasadda Bariga Dhexe u dhuunduleela xiligaasi sheegeen in dilkiisa uu qayb ka ahaa olole PLO ay ku doonaysay in ay ku aamusiiso dadkii mucaaradka ku ahaa ee ku noolaa Yurub.
Wiil uu dhalay ninkan oo lagu magacaabo Khaalid ayaa sheegay in ay jireen dad badan oo aanan ku farxin kaartuunadiisa oo ay xitaa ka mid ahayd dowladda Israa'iil.
Wiil arday ah oo Falastiini ah oo dilka loo xiray ayaa markii dambe lagu xukumay in uu haystay hub iyo waxyaabaha qarxa, wuxuuna sheegay in uu u wada shaqaynayay PLO iyo hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mosad.
Ma jirto qof loo xukumay dilka ninkan, balse waxa ay dad goobjoogayaal ah sheegeen in ay arkayeen nin hubeysan oo leh muuqaalka dadka Bariga Dhexe, oo da'diisa lagu qiyaasay 25 jir, kaasi oo tin badan lahaa.
Ka hor dilka Naaji waxa uu daabacay wax ka badan 40,000 oo sawir gacmeedyo ah oo arrimaha siyaasadda bariga dhexe u badan, isaga oo si isku mid ah wax oga sheegi jirey Israa'iil iyo maamulka Falastiin.
Sawiradiisa waxaa ka mid ah sawirkii caanka ahaa ee Handala oo ah ilmo yar oo markasta dhabarka u jeedin jirey akhristayaasha si loo muujiyo in adduunkayada ay dhabarka u jeediso dhibaatada reer Falastiin.
Qof goobjooge ah ayaa sheegay in uu arkay nin kale oo waddada goynaya, kadibna galaya gaari meesha kusii diyaarsanaa isteerin bixid ah oo Mercedes ah waxyar kadib markii uu dilka dhacay.
Ninkan ayaa lagu qiyaasay in uu 50 jir ahaa, una qaab ekaa dadka Bariga Dhexe, gacantiisa ayaa jaakada hoosta ugu jirtey sidii isaga oo wax qarinaya, waxana uu ahaa nin waxoogaa cayilan.
Taargada gaariga ayaa la sheegay in ay ku jireen xarfaha P iyo H, kuna dhamaanaysay 11L.
Dean Haydon waa madaxa qeybta argagixiso la dagaalanka ee ciidanka booliiska UK, waxa uu sheegay in uu rumaysan in nimanka la arkay ay yihiin kuwii dilka fuliyay.
Hubkii dilka lagu gaystay oo ahaa bistoolad nooca Tokarey ee 7.62 ayaa labo sano kadib laga helay meesha lagu magacaabo Paddington 22-ki April 1989.
Taliye Dean waxa uu aaminsanyahay in 30 sano ay wax badan isbadaleen, lagana yaabo in dad markaasi fikrad aaminsanaa, ay maanta wax kale aaminsanyihiin, lagana yaabo in ay hadlaan oo ay qiraal bixiyaan.
Israa'iil oo qaraarkii Qaramada Midoobay ku tilmaantay mid ceeb ah
DAAWO: Dhulka UN ay amartay in la joojiyo dhismaha ka socdo